» गायक सूर्य रुम्बाको ‘दुई शब्द’ मा हेरुका र निरञ्जलीको जोडी
गायक सूर्य रुम्बाको ‘दुई शब्द’ मा हेरुका र निरञ्जलीको जोडी
१ श्रावण २०७७, बिहीबार १२:५५
मकवानपुर, १ साउन । ‘नाम’ नामक चर्चित एल्बमबाट श्रोताको मन जित्न सफल गायक सूर्य रुम्बाले पूनः अर्को गीत सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त एल्बमपछि पनि विभिन्न गीतहरु श्रोतामाझ ल्याएका गायक रुम्बाले यसपटक ‘दुई शब्द’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सार्वजनिक गीतमा गायक सूर्य रुम्बाकै शब्द र संगीत रहेको छ । दक्षिण कोरियामा रेकर्ड गरिएको गीतलाई प्रतिक थापाले एरेञ्ज गरेका हुन् । उक्त गीतको म्यूजिक भिडियोमा चर्चित मोडलहरु हेरुका लामा र निरञ्जली लामाले अभिनय गरेका छन् । म्यूजिक भिडियोमा बाल कलाकारहरु सगुन रुम्बा र पेमजोङ लामालाई पनि हेर्नसकिन्छ ।
गीतको म्यूजिक भिडियोलाई रामकुमार केसीले छायाँकन गरेका हुन् । विशालराज राईको निर्देशनमा तयार भएको भिडियोलाई टेकेन्द्र शाहले सम्पादन गरेका हुन् । भिडियोको कन्सेप्ट हेरुका लामाले तयार गरेका हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
के कसैलाई आफ्नै मोबाईलले लखपति वा करोडपति बनाउन सक्छ ? के बिना लगानी मोबाईलबाट पैसा कमाउन सकिन्छ ? यदि तपाईको मनमा यस्तै प्रश्न छन् भने अबको केही समयमा तपाईले त्यसको जवाफ पाउनुहुनेछ । आज हामी पाई नेटवर्क के हो अनि यसमा आईडी कसरी बनाउने र कसरी पैसा कमाउने भन्ने विषयमा जानकारी दिँदैछौँ । हेर्नुहोस् भिडियो–
कमेडी च्याम्पियनको दोस्रो सिजनमा भाग लिने तरिका
लोकप्रिय कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’ को दोस्रो सिजनको तयारी गरिएको छ । तयारी अनुसार कान्तिपुर टेलिभजनले ‘कमेडी च्याम्पियन’को टिमसँग सहकार्य समेत गरेको छ । शोको पहिलो सिजन हिमेश पन्तले जितेका थिए । दोस्रो सिजन अझै चर्चामा आउने सम्भावना बढेको छ । कसरी हुने त दोस्रो सिजनमा सहभागी ? हेर्नुहोस् यो भिडियो–
प्रकाश सपूतको अर्को हिट गीत ‘नमस्कार’
एउटा चर्चित गायकका लागि श्रोताहरुको बाक्लो भिड अगाडि स्टेजमा उभिएर गीत गाउनु जस्तो रमाईलो पल अरु नहुन सक्छ । तर समय सधैँ एउटै हुँदैन । अहिले संसारका मानिसहरु घरभित्रै चार भित्ताहरुको बिचमा थुनिएका छन् । त्यस्तो बेला एउटा गायकले लाखौँ दर्शकहरुका अगाडि प्रस्तुति दिने सपना देख्नु निकै कष्टकर हुन्छ । यसै सेरोफेरोलाई टपक्क टिपेर चर्चित गायक प्रकाश सपूतले ‘नमस्कार’ बोलको नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन् । हेर्नुहोस् रिभ्यू–